Root Tianeptine Sodium Salt Powder (30123-17-2) Soosaarayaasha - Phcoker
Budada cusbada ee Tianeptine sodium waa isku-darka tricyclic, waa isuduwaha xulashada ee 5-HT (serotonin; sc-201146) qaadashada in vitro….
Fiidiyowga Root Tianeptine sodium cusbo (30123-17-2) video
Noocyada qamriga tianeptine sodium cusbada (30123-17-2) Qeexitaannada
Product Name Kalluunka Tianeptine sodium cusbada cusbada
Magaca Kiimikada Tianeptine sodium; Tianeptine sodium salt; 30123-17-2; Stablon; Coaxil;
Molecular Wsideed 458.93
barafku Psaliid 1800C
karisaaning Psaliid 609.2 ° C at 760 mmHg
Storage Temperature Diidmada RT
Application Budada Tianeptine sodium salt waa cusbo of Tianeptine.
Tianeptine waa antidepressant.
Root Tianeptine sodium salt budow (30123-17-2) Sharaxaad
Tianeptine sodium salt waa cusbo of Tianeptine. Tianeptine, a tricyclic compound, waa fududeeye xulasho ah ee 5-HT (serotonin; sc-201146) qaadashada in vitro iyo gudahood. Intaa waxaa dheer, Tianeptine waxaa lagu soo waramayaa in ay u dhaqmaan sidii doorasho xakameyn ah ee kor u qaadista dopamine waxayna la mid tahay aminepine. Tianeptine ma laha saameyn la taaban karo oo ku saabsan isticmaalka monoamine. Daraasaddan oo la adeegsanayo synaptosomes daahirsan oo ka timid maskaxda ragga, Tianeptine ayaa lagu soo warramey in ay kor u qaadayso serotonin-kaca gobollada maskaxda ee xulashada. Synaptosomes purified waxaa laga helay jiirka oo lagu kulay xinjirro-calaamado ah 5-HT iyo Tianeptine in vitro. The synaptosomes ayaa markaas la falanqeeyay ee la qaboojinta iyo sii daayo 5-HT iyada oo la adeegsanayo mashiinka sheyga ee dareeraha ah.
Noocyada Root Tianeptine sodium salt waa falgal kala geddisan oo leh noocyo kala duwan, gaar ahaan habka glutamatergic. Waxaay hoos u dhigeysaa glutamate sii-deynta iyo bedelaysaa shaqada AMPA ee daaweeye AMAN-ka wuxuu sidoo kale u dhaqmaa sidii loo yaqaan agagaaraha daawada μ-opioid (EC50s = 194 iyo 641 nM loogu talagalay soo celinta bini'aadamka iyo miyirka, siday u kala horreeyaan). Waa waxtar u leh sida fluoxetine ee maamulka maaraynta dhibaatada kadeedka ah ee ka danbeysa.
Milixda sodium ee Tianeptine waxay leedahay awood nootropic ah marka loo eego shakhsiyaadka garashadoodu ay si xun u saameeyaan cilladaha niyadda waxayna awood u leeyihiin inay horumariyaan diiradda iyo feejignaanta shakhsiyaadka leh feejignaan liita sidoo kale.
Noocyada Tianeptine sodium cusbo (30123-17-2) Habka Wax-qabadka
Daraasadihii ugu dambeeyay waxay soo jeedinayaan in tianeptin uu u dhaqmo sida gebi ahaanba agonist oo ku jira maqaarka daawada opioid (MOR). Tianeptine ayaa caqabad ku noqotay jaantuska monoaminergic ee niyad-jabka, iyo sidoo kale qaababka taageerada monoaminergic oo taageera kuwaas oo tallaabooyinka lagu ogaanayo antidepressant-ka ugu caansan ee la sharraxay. Gaar ahaan, daroogada waxaa loo maleynayaa in ay si joogto ah u beddesho daaweenta glutamate ee ka soo goosta hargabka isku-dhafan ee Hippocampal CA3. Cilmi-baarista hadda waxay soo jeedinaysaa in tianeptine ay soo saartey saameynteeda daawada niyad-jabka iyada oo loo marayo wax-qabadka hawl-qabadka glutamate (tusaale ahaan, AMPA reseptors iyo NMDA reseptors) waxayna saameeyeen sii-deynta walxaha neerotrophic (BDNF) ee maskaxda, kaas oo saameeya xajmiga neuraliska. Daraasado dhowaan la sameeyey oo lagu taageeray doorka tianeptine ee habeynta waxqabadka glutaminergic ee amygdala, gobolka dareenka maskaxda ee la xariira xusuusta.
Tianeptine waxay hoos u dhigtaa jawaab-celinta hypothalamic-pituitary-adrenal ee walwalka, sidaas awgeedna waxay ka hortagtaa arrimaha dabeecadda la xiriirta cadaadiska. Xanuunada, walbahaarka xannibaadda ba'an wuxuu kordhiyaa heerarka ka baxsan ee glutamate ee amygdala basolka saameyn ku yeeshay by tianeptine. Si xiiso leh, fluoxetine SSRI waxay kordhisay heerarka glacamate ee ka baxsan amygdala baska iyada oo aan loo eegin xaaladaha cadaadiska. Xogtaasi waxay muujineysaa in farsameynta ficil-celinta tianeptine ay ka duwan tahay SSRI-da waxayna taageertaa falsafadda in farsameynta ficil-celinta tianeptine ay la xiriirto isbeddelka firfircoonida glutaminergic ee amygdala iyo hippocampus.
Marka laga soo tago hababka kor ku xusan, tianeptine waa daawo liddi ku ah antidepressant iyo daawada anxiolytic taasoo kicinaysa qaadashada serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), iyo 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) oo ku jira unugyada maskaxda.
Faa'iidooyinka of Noocyada Tianeptine sodium salt (30123-17-2)
Tianeptine sodium salt waxay daaweyn kartaa xanuunka niyadjabka weyn.
Milixda sodium ee Tianeptine waxay leedahay walwalka iyo niyadjabka iyo iyo sifooyinka nootropic.
Tianeptine sodium cusbadu waxay kobcisaa dabeecadda waxayna hagaajisaa xaalada maskaxda.
Tianeptine sodium salt waxay xakameyn kartaa weerarada argagaxa ah ee dhaca.
Tianeptine sodium cusbadu waxay daaweysaa xanuunka la xiriira fibromyalgia.
Milixda cusbada Tianeptine cusbada loo isticmaalo daweynta niyad jabka ragga qaba naaquska.
Tianeptine sodium salt waxay leedahay saameyn sahlan ee ADHD.
Tianeptine sodium salt sidoo kale kor u qaadida neuroplasticity.
talinayo Kiniiniga Tianeptine sodium cusbada (30123-17-2)
Tianeptine Sodium waxay leedahay nolol yar oo gaaban oo ku saabsan saacadaha 2.5XXXUMX, waxayna u baahan tahay laba caso oo maalintii oo dhan ah. Qiyaasta soodhiyam ee daaweynta tianeptine waa xmUMX mg saddex jeer maalintii, wadarta guud ee 14mg maalintii.
Ha ka dhaafin 50mg of Tianeptine Sodium hal maalin. Sidaas oo kale waxay u furi kartaa albaabka loogu talagalay xad-gudubka iyo takoorka dheeraadka ah.
Dhibaatooyinka ay keento ee budada Tianeptine sodium (30123-17-2)
Budada cusbada ee Tianeptine sodium waxay la falgashaa qaybo badan oo maskaxda ah oo ay kujiraan qabtayaasha daawada 'opiod receptors', taas oo abuuri karta saameynta daawada euphoria. Saameynaha kale ee soo raaca ee soo noqnoqda waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
▲ Madax xanuun (illaa 18%)
▲ Dawakhaad (illaa 10%)
▲ Argagaxa / argagaxa habeenkii (illaa 20%)
▲ Qulqulka (illaa 10%)
▲ Afka qalalan (illaa 20%)
Waxyeellooyinka kale waxaa ka mid ah waxyaabaha sida calool istaagga, lallabbo, walaac ama sunta Beerka. Dhibaatooyinka aadka u daran waxaa ka mid ah ka bixitaanka ka dib xadgudubka iyo qiyaasta 0.1 - 0.3% ee dadka isticmaala ayaa dhibaatadan yeelan doona. Sidee waligeed, sida aad ubogtay, dhibaatooyinka soo raaca ee cusbada sodium ee Tianeptine waxay ku xirnaan doontaa shakhsiga iyo shakhsiga shaqsiyeed.
Waxaa mudan in la ogaado:
Bukaanada waaweyn waa inay qaataan qadar yar oo ah Tianeptine sodium salt, sida bukaanka qaba xanuunka kelyaha. Qiyaasta uma baahna in lagu hagaajiyo bukaanada leh khamriga ama naafonimada beerka, ama bukaanjiifka ku shaqeeya sifeynta .Tirafyada Daawooyinka Antidepressants, sida tianeptine, waxay kordhiyeen khatarta beerka sunta ah.